The Irrawaddy's Blog: ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲပေးခဲ့တဲ့ လေးဖြူ
၂၀၁၀ မှာ ရော်ကာ လေးဖြူက ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို အားပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။
မတ် ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် ENVOY ဂျာနယ် မှာ ဖော်ပြထားတာပါ။
"၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးကို မဲပေးခဲ့တာပါ။ ဘာကြောင့်ပေးလိုက်ရတာလဲ ဆိုတော့ စိတ်ထဲ ရှိတာပဲ ပေးလိုက်တာပါ" လို့ လေးဖြူက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
လေးဖြူ၊ စန္ဒီမြင့်လွင်၊ ၀ိုင်း တို့ရဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဖြေကြားချက်များကို ဒီမှာ http://1.bp.blogspot.com/-lidNbm6s_kI/T3F__BQxFZI/AAAAAAAAUkQ/lLt56rZPRg0/s1600/000mil%2B%25283%2529.jpg ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Posted in: Election , အမြင် , အနုပညာ ရပ်ဝန်း , ရွေးကောက်ပွဲ
မဲပေးချင်တဲ့သူပေးတာတော့ လွတ်လပ်ခွင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် လေးဖြူ တော်တော်တုံးမှန်း အခုမှ သိတော့တယ်။
It is his rights to vote whoever he likes. But the reason given isabit shallow and sleazy. He must haveavalid reason and he should reveal about it.
"Food for work is better than work for food"စားဖို့လုပ်ခြင်းထက် လုပ်ဖို့စားခြင်းက ပို၍ကောင်းမြတ်၏။
pesangoak said... :
umm...damn,how come my "idol" is soooo "IDIOT"..... DAMN... I am not idiot layphyu fun anymore...... .!.
Tin Htut Aung said... :
I knew alrady about Lay Phyu's knowledge from his comments on copy song and own tune. He said copy songs are as good as own tune and people of Burma not need to raise this issue as we all re living on 21st century.
He beleive himself that he is famous rock singer and does not beleive of own creation and may be not able to do so.
How can we show or present one of his song in any international music show.
I only respect to those Sai Htee Sai, Khing Htoo, Khin Mg Tow, Ko Nay Win, Sai Khan lait and all own tune creators and never listen to those creepy copy song in my life.
ကြိုက်တာထည့်ပေါ့ ... ဒါပေမဲ့ .. ဒီလို Declare လုပ်တာက
အများ ကို ဘောင်းဘီ ဇစ် ဖြုတ်ပြလိုက် သလိုပါဘဲ ...
မြှောက်တောက်တောက် ဖြစ်နေတာ လား ..
အင်း သူ့ အခွေတွေ ကြည့်ချင်စိတ် နားထောင်ချင်စိတ် မရှိ တော့ပါ .. တခြား အဆိုတော် တွေ အများကြီးပါ
Mr. said... :
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျုပ်လည်း လေးဖြူပရိသတ်ပါပဲ။ လေးဖြူနဲ့IC ကို ၁၉၉၅ ကတည်းက အားပေးလာခဲ့တာ ယနေ့အထိပဲ။ ဒါပမယ့် သူ့ဂီတကို မြတ်နိုးတိုင်း သူ့စိတ်ဓါတ်ကို ကြိုက်ရမယ်ဆိုတာတော့ နည်းနည်းတော့ ပြောစရာရှိလာတယ်။ သူ့ဘာသာ ၂၀၁၀ က ကြံ့ဖွတ်ပဲ မဲပေးပေး ကျုပ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။ ကျုပ်မြင်ရသလောက်ပြောရရင် ဒေါ်စု နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျတုန်းက Power54 ဆိုပြီး စီးရီးထုတ်တယ်။ ပြည်သူတွေက သူ့ဂီတကို ချစ်တော့ ဒေါ်စုကိုလည်းချစ်တော့ လေးဖြူဆိုတဲ့ကောင်က ဘာလိုလိုညာလိုလိုပေါ့။ ဆံပင်အရှည်ထားလိုက် ဂတုံးရိတ်လိုက်နဲ့။ အမျိုးမျိုးလုပ်ပြတယ်။အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သယောင်၊ နိုင်ငံရေးအရောင်အသွေးရှိတဲ့ အဆိုတော်လိုလို ဘာလိုလိုနဲ့။ အမှန်ကတော့ စားဖား။ ဒေါ်စု နေအိမ်မှာ အနုပညာရှင်တွေ စုံဝေးကြတော့။ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ ပြည်သူတွေက လေးဖြူရော လေးဖြူရော ဆိုတော့မှ ပေါ်လာတယ်။အမှန်က ခြံခွထိုင်တဲ့ စီးပွားရေးသမား။ စားဖား။ ကျုပ်တော့ နည်းနည်းရွံလာပြီဗျာ။ အိုင်စီကိုလည်း ကြည့်နေတာ ကြာပြီ။ အထာကြီးနဲ့။ Quality တွေကိုပဲ ပေးနေသလိုလို။ အမှန်တော့ဗျာ ဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင် အများဆုံး ပြည်သူတွေထမင်းကိုစားနေတာ လေးဖြူနဲ့ အိုင်စီပဲ။ ကျုပ်တော့ အမှန်တိုင်းပြောမယ် နောက်တက်တွေပဲ အားပေးတော့မယ်။ Idiot တို့ ကျားပေါက်တို့ပဲ။
အောင်ကြူး said... :
ဝမ်းနဲပါတယ် ကိုလေးဖြူ။ ခင်ဗျားကို အများကြီး မျှော်လင့်ထားခဲ့တာ..။ :(
Now I know Lay Phyu is that thick!!
i already deleted all Lay Phyu Songs. i not listen anymore his songs, s+++++ man,no brain,
ဒါကိုယ်.ကိုကိုယ်ဘာင်းဘီချွတ်၊ ကိုယ်.ကိုကိုယ်လည်ပင်းစွတ်ယူဒါဘဲ၊ တကယ်.ငတုံးဘဲ၊ ကျွန်တော.တတက်အထင်ကြီးခဲ.ဒါအာလကားပါလား၊ ဘယ်တော.မှအားမပေးတော.ပါ၊တကယ်ဆိုရင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင်.ပေးခဲ.မိရင်တောင်မှဒီလိုမဖွင်.ပြောသင်.ဘူးလို.ထင်တယ်၊မင်းတကယ်တုံးဒါဘဲ။ လေးဖြူရေ ဒါမင်းရဲ.နေ၀င်ချိန်လို.တာမှတ်ပါတော.၊
OO said... :
i hate lay phyu .
ဝေဇင် said... :
ိကိုလေးဖြူရေ.. ဒီလို ၀ိုင်းဆဲမယ်မှန်းသိရဲ့နဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရဲတဲ့ ခဗျား သတ္တိကို လေးစားတယ်ဗျာ... လူတိုင်း (ခဗျားကို) လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိသလို လွတ်လပ်စွာ မဲပေးခွင့် လဲ ရှိပါတယ် ... တလျှောက်လုံး ပလူးပလဲလုပ်ပြီး အခုမှ အမေစု အမေစု ဖြစ်နေတဲ့ လူမင်းတို့လို သူတွေနဲ့စာရင် ခဗျားတို့ (IC) အဖွဲ့သားတွေကို ပိုလေးစားပါတယ် ..
ဟေ့ကောင် ဝေဇင်... သတ္တိရွေးနေတဲ့နေရာလဲမဟုတ်ဘူး။ သူရဲကောင်းလည်းမရွေးဘူး။ မင်းတို့လို လူဆဲခံရတာကို စတိုင်ထုတ်တာမှ သတ္တိဆိုရင်။ ထောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျခံခဲ့ရတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့၊ ကိုကိုကြီးတို့ရဲ့ သတ္တိကိုကျတော့ ဘယ်လိုသတ္တိလို့အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ရမလဲ။
ဒါမျိုးကျတော့ မင်းလေးစားကောင်းရမှန်းမသိဘူးထင်တယ်။ အဲတော့ကွာ
နိုင်ငံရေးတို့ တနိုင်ငံလုံးအရေးတို့ကို မသိတဲ့ မင်းတို့လို့လူတွေကို ငါက ပိုလေးစားတယ်။ ဒေါ်စုနားကပ်တဲ့လူတွေကို မင်းက ဝေဖန်နေတယ်ဆိုတော့ ကြည့်ရတာ မင်းတော့ နည်းနည်းလွတ်နေပြီထင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူလူထုကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စုက စစ်တပ်ထက် အာဏာပိုရှိသွားမှာ ကြောက်တဲ့ လူတစ်စုထဲကထင်တယ်။သေချာပြန်စဉ်းစား မင်းကိုယ်မင်း။ ဟော်ကီသိပ်မလုပ်နဲ့။ ဒီလောက်ပဲ။
ဒီတခေါက်လည်း ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲတော့ဟုတ်ပြီးလား အရင်းနေကြ ဖွတ်ကိုပဲပေးလိုက်ပါ ဒီလောက်ရှင်းနေတဲ`ဟာ က
ကော်ပီနဲနာမည်ကြီးခဲ့တယ် အခုကြမှ ၁၄ ၁၅ လုပ်မနေနဲတော ဟုတ်ပြီလား(စကာပုံအရ သာ ပေါင်း ညာ စား )အဖြစ်ကြီးကို ဟာဟား
တူးတာပါ။ 1988 မှာတနိင်ငံလုံအုံကြွမှုကြီးမှာကိုလေးဖြူ
အင်း......ကြည့်ရတာကတော့ ကိုလေးဖြူနဲ့ ငြိခဲ့တဲ့သူတွေက အယ်အန်ဒီ ကို မဲပေးကြလို့ သူတို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုများပေးခဲ့တာလားမသိ။ ဘယ်သူကို မဲမပေးသင့်ဘူးဆိုတာ ကိုလေးဖြူတကယ်သိလောက်ပါတယ်။ လူ့သဘာဝ က ကိုယ့်နဲ့ မတည့်ရင် ဆန့်ကျင်ဘက် လိုက်လုပ်တတ်ပါတယ်။
Kyi Thar said... :
လေးဖြူဟာ ရိုးသားတယ်၊ အစိုးရပွဲပိတ်တာလဲ ခံရဘူး တယ်။ ကျန်တဲ့ အနုပညာသည်တွေလဲ သူလိုပဲ ကြံဖွံ့ကို ထည့်ခဲ့မှာပဲ။ အခု NLD
ခတ် ဖြစ်လာလို့ သာကူး သွားကြတာ။
လေးဖြူလို ရိုးသားစွာ ၀န်မခံကြဘူး။ အနုပညာနဲ့ ရွေးကောက်ပဲ တခြားစီပဲ။
သူဘယ်ပါတီကိုပဲ ပေးပေး ကျွှန်တော်တော့ သူ့အနုပညာကိုလေးစားနေမှာပဲ။ ဝေဖန်တဲ့
လူတွေသူ့ အနုပညာကို မြတ်နိုးတာလား မိုးခါးရေသောက် တာလား...... ပြန်စဉ်းစားပါ။
Napster said... :
tsk tsk... ဂီတက ဂီတ သက်သက်စီပါ။ ကိုယ်နဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာနဲ့ပဲ တုံးရတာနဲ့ေ-ာက်ပြစ် ပြောချင်ရတာနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ စိတ်ဓာတ်တွေကမှ အောက်တန်းကျနေတာ။ ပြောတော့ ဒီမိုကရေစီ လုပ်နေတော့ အတ္တဆန်ဆန်။ သူလဲ သူထင်တာ သူလုပ်မှာပဲ။ ကိုယ်ထမင်းကိုစားပြီး သူများကိုေ-ာက်ပြစ် ပြောနေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို ပိုရွံတာ
အဲလောက်ထိ ဂေါက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး လေးဖြူေ၇ ၊ မင်းတော်၂ဂေါက်တယ် ၊ထွီးးးးးးးးးးးးးး
Half of Lay Phyu songs are copied from foreign songs and he's famous for most of them ! Next time you come to Singapore or other countries,.. Don't perform those songs in public and put the shame on Burmese people. I'd rather hav other new bands like "Idiots" to perform in public or anywhere else.
BoB was sponsored by the minister's sons who are businessmen. IC shows are sponsored by crony businesses. So, to return the favor, he voted USDP. That's fine. But does he have to say it publicly? Does it indirectly mean that he will remain asapro-military against the general population including his fans? Big stars make big mistakes and this is one of them. Adios, Lay Phyu.
Because of this GOV, we are suffer working at oversea and in our contry people are very poor. And you so proud of vote this GOV and announce your secrest!!! voting is confidential. If you say that youger singer and your fun will follow that . DO YOU REALLY aware that >>> think twice before you talk. I won't be anymore your fun. Really SAD Lay Phu.
I never listen Lay Phyu's song and also never watch IC show. There are2reasons.
1. All are copy songs
2. No own creation in theirs songs and music. IC playing exectly copy to Original songs. it is just like download form internet to hard disk
How I can tell to my friends that they are most famous band and singer of Burma while they are singing song of Bon Jovi, Scorpion, Egle and many others.
THe IC unplugged show is exectly replicated to Scorpion's uplugged. Ha Ha. Even the way of singing style is same copy from Eagle's reunion show. VERY FUNNY.
Now i heard his idea about Kyant Phut. I even hate him.
I wasaLa Phyu's fan. But from today onwards, I won't listen his (copied)songs any more.
IC + La Phyu = Sorry
IC - La Phyu = Ok
From IC's FB status ..
"လေးဖြူနှင့် Iron Cross ပရိသတ်များသုို့ ................
ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသော လေးဖြူ၏ အင်တာဗျူးမှာ အမှန်တကယ် မေးမြန်းဖြေဆုိုထားခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်ပဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာဖြင့် လုပ်ကြံဖန်တီးထားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားဥပဒေကြောင်းအရ အမြန်ဆုံး ရင်ဆုိုင်ဖြေရှင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။"
now STFU all haters. Keep talking shit without knowing the truth.
for all ppl who said LP only sing copy song, let me ask you how about other singer? only LP & IC sing copy song? i don't care you guys not listen LP songs. But now stop giving stupid comment without knowing the fact. pfft
Please give all of us where to find that official information about it,
It can be also created by photoshop. A journal will not mention something about him without proper evidence.
Show me what Lay Phyu really response on this .. then I will believe ... He is now partner of they cronies ... I don't believe him anymore ... Go To Hell ...
MR7 said... :
idiots,that was really did by lay phyu,he is idiots,why he become famous,he already known.power 54 was attack to teenagers heart.why he sing power 54,he was consult to the audience...go away lay phyu and ic,they didn't have creative talent.only immitate and fake.this was not honour for myanmar.
John Paul said... :
လေ ဖြူသီချင်းတွေကောင်းပါတယ် မိတ္တူသီချင်းတွေပေါ့ ။ အေ ပြောချင်ဒါက ကြိုက်တဲ့ပါတီတော့မဲ့ပေးပိုင်ခွင့်ရှိဒါဘဲ/ သမ္မတကြီးလည်းအယင်တုန်းက နာမည်ဆိုးဘဲအခုမှနိုင်ငံတကာမျက်သာရ လူထုကရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့သမ္မတလိုလိုဖြစ်သွားဒါဘဲ.